प्रवास | Birat Khabar
प्रवास, फल्यास न्यूज, समाचार
विदेशमा रहेका नेपालीलाई भिसाको म्याद सकिए पनि समस्या नहुने
३० वैशाख । सरकारले विभिन्न पेशा र व्यवसायमा विदेशमा गएका नेपालीको भिसाको म्याद सकिएकै कारणले कानूनी जटिलता व्यहोर्न नपर्ने जनाएको छ ।विदेशमा कोरोना संक्रमित नागरिकलाई सम्बन्धित देशको नागरिकसरह नै उपचारको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित देशलाई आग्रह गरिएकाले उपचारमा समस्या नदेखिएको सरकारको दावी छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सबै ठाउँमा सहज अवस्था नभएपनि प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएर कानूनी […]
प्रकाशितः ३० बैशाख २०७७, मंगलवार
पबित्रा ढकाल, बिराटनगर । बिराटनर अस्पताल बिराटनगर(बिराट नर्सिगं होम) र रोटरी क्लबको सयुक्त आयोजनामा महानगरपालिका नजिकै रहेको कटहरी गाउँपालिका वडा नं १ खोरीया टोलमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सम्पन्न भएको छ । २ हजार भन्दा बढीले सेवा लिएको सो स्वास्थ्य शिबिरमा निःशुल्क औषधी बितरण समेत गरेको छ । स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा अन्तर्गत अस्पतालले वडा भित्र रहेका […]
प्रकाशितः ९ पुष २०७६, बुधबार
समाजसेवी गोयलद्धारा निःशुल्क सामान बितरण
पबित्रा ढकाल, बिराटनगर । समाजसेवी एवम् उद्योगपति दीनबन्धु गोयलले झापा जिल्लाको नेत्रहिन संघका पदाधिकारीहरु मार्फत जीवन उपयोगी सामानहरु निःशुल्क बितरण गरेका छन् । उद्योगपति गोयलले २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा झापाको भद्रपुरमा कम्बल र ह्विल चियर वितरण गरेका हुन । भद्रपुरको गिरि चोकमा आयोजित एक भब्य कार्यक्रममा समाजसेवी गोयलले २० थान कम्बल र २ […]
प्रकाशितः २० मंसिर २०७६, शुक्रबार
सुनसरी जिल्लाका सशस्त्र प्रहरीले २ लाखको अबैध समान बरामत
देवाञ्गन्ज, सुनसरी । सुनसरीको देवानगंज गा.पा.र बर्जू गा.पा. भारतको सिमाना सँग जोडिएको हुदा त्यहाँ अबैधरुपमा भन्सार छली गरी व्यापारीहरुले तस्करी गरीरहेको समान गए राती बरामत गरेको छ । गए राती अबैधरुपमा तस्करी गरी ल्याएको एक लाख ८० हजार बराबरको औषधी र सामानहरु सशस्त्रले बरामत गरी राजश्वलाई बुझाएको छ । ससस्त्र प्रहरी बल देवानगंज का ससत्र […]
प्रकाशितः ५ आश्विन २०७६, आईतवार
मार्चपासमा प्रदेश पदक लिन सफल सैनिक आबासिय स्कुल धरान
बिराटनगर । मुख्य मन्त्री शेरधन राईले प्रदेशस्तरीय मार्च पास गर्ने बिद्यालयहरुलाई सम्मान गरेका छन् । आज बिराटनगरको रंगशाला स्थित बिभिन्न बिद्यालयहरुले आफनो झाकी र बिद्यालयको पोशाकमा सजिएर आएका बिद्यार्थीहरुले मार्च पास गरेका थिए जसमा सामुदायिक बिद्यालयहरुबाट चौथो स्थानको पदक लिन सफल भएको शैनिक आबासीय बिद्यालय धरान रहेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको संविधान दिवसको […]
प्रकाशितः ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार
पूर्बि कमाण्ड अन्तर्गत जनपत्रकार संगठनले भन्यो पत्रकार थपलियाको स–सम्मान रिहाई
बिराटनगर । नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य, जलजला मासिकका सम्पादक, लेखक तथा संस्कृतिकर्मी खेम थपलियालाई साउन २५ गतेका दिन काठमाडौंको बागबजारबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । थपलिया नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका महासचिव पनि हुन् । उक्त संघका अध्यक्ष माइला लामा पक्राउ परेपछि संघका तर्फबाट सरकार विरुद्ध विज्ञप्ती जारी गरेका थिए […]
प्रकाशितः २९ श्रावण २०७६, बुधबार
पथरीशनिश्चरेको पशुपति सामुदायिक वनमा शव फेला
राजकुमारी तामाङ, पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा आज एक शव फेला परेको छ । पथरीशनिश्चरे वडा नम्बर १० ऐयावारीका ४५ वर्षिय कमल बहादुर धिमालको शव रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबारबाट हराईरहेका धिमाल पुर्वपश्चिम राजमार्गबाट २ सय किलोमिटर भित्र घना जंगलमा मृत अबस्थामा फेला परेका हुन् । मृत धिमालको लाश छेउको रुखमा […]
प्रकाशितः १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार
झापास्थित सिप विकास तालिम केन्द्रका प्रमुख र नासु घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ
झापा । अख्तियारको टोलीले झापास्थित व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र भद्रपुरका प्रमुख समुन्द्र मण्डल र नायव सुब्बा राजकुमार धिमाललाई ३५ हजार घुसरकम सहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीको टोलीले सोमबार दिउँसो कार्यालयबाटै प्रमुख मण्डल र नासु धिमाललाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ । केन्द्रले सञ्चालन गर्ने विभिन्न तालिमको लागी […]
ईलाम । ईलाम नगरपालिका-१२ साडुम्बा बस्ने ४० बर्षीय सुक बहादुर भन्ने पूर्ण बहादुर लिम्बुको खुकुरी प्रहारबाट मृत्यु भएको छ । लिम्बुलाई जेष्ठ १४ गते स्थानीय २५ बर्षीय बिनोद राईले खुकुरी प्रहार गरी गम्भीर घाईते बनाएका थिए । घाईते लिम्बुलाई उपचारको लागि झापाको बि.एण्ड.सी. अस्पताल लगिएकोमा उपचारको क्रममा बिहान ९;१० बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय […]
संखुवासभा । संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका-१ टेङछुङमा बुधवार राती कुटपिटबाट १ जनाको मृत्यु भएको छ । रातको समयमा स्थानीय ४० बर्षीय आईत बहादुर राई र बर्ष ३० को बिनोद भन्ने किशोर राई बिच पुरानो रिसिईबिका कारण बादबिबाद भई झै(झगडा हुँदा रिशको आवेगमा किशोर राईले आईत बहादुर राईलाई धान कुट्ने मुस्लोले टाउकोमा प्रहार गर्दा उनी गम्भीर घाईते […]